Sweden waa wadanka ugu diimaha neceb aduunka | Somaliska
Sweden waa wadanka ugu diimaha neceb aduunka
Baaritaan lagu sameeyay dadka iyo diimaha aduunka ayaa waxaa lagu soo bandhigay in wadanka Sweden uu yahay kan dadkiisa ay ugu diinta yaryihiin. 8 ka mid 10 kii qof ee Sweden ku nool ayaa sheegtay in aysan wax diin ah haysan ama ay yihiin kuwo aaminsan in uusan Allah jirin.
Baaritaanka oo laga sameeyay dhamaan wadamada caalamka oo ay samaysay shirkada Gallup ayaa lagu soo bandhigay in Sweden uu yahay wadanka ugu diinta yar. Wadanka Thailand ayaa noqday kan dadkiisa ay diinta aad ugu dheganyihiin. Sidoo kale waxaa kaalintaas Thailand la qaybsaday Morocco, Bangladesh iyo Georgia.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa warbixinta lagu sheegay in dadka xaadiraya masaajida ku yaala Sweden in ay kor u keceen, taasoo ay sabab u tahay Muslimiinta ku soo badanaysa wadanka. Waxaa kale oo la sheegay in inkastoo aysan dadka Sweden aaminsanayn wax diin ah, hadana ay haystaan caadooyinka Kiristaanka sida Lucia, Christmaska iyo kuwa kale.
Swedishka ayaa aaminsan in diintu ay tahay arin qaas ah, oo aan jeclayn in ay dadka kala hadlaan arimaha diimaha.
Weerarkii France ka dib Muslimiinta qaasatan Soomaalida waa loo yaabaa!
April 14, 2015 at 18:06
ayaga wexey aamin san yihiin humaniska människosyn taasina waa baadi alle ha soo hadeyo ayan leenahay
April 15, 2015 at 02:00
Alle Ka Baqe Bini Aadam Kama Baqe says:
April 15, 2015 at 16:23
Sawirka Kaniisadda Maxaad usoo Galisay Sxb ? Masaajid Sawirkiisa Hadaa Soo Galiso Malagu Cadaaba ? Alle Ka baq ee Sawirka Meesha Ka Qaad Ama Masaajid soo Gali Thanks